"မသိဘူး" ဟုပြောသောအခါ "I don't know" ဟုသာအပြောများကြပါသည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင် အခြား အလဲအလှယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် အသုံးအနှုန်းများကို ဥပမာများဖြင့်ရှင်းပြထားပါသည်။ ယမန်နေ့မှ တင်ပေးလိုက်သော သင်ခန်းစာကဲ့သို့ပင် ချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်မည့် စကားပြောသင်ခန်းစာ ဖြစ်ပါသည်။
အရပ်သုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Are you corning out later? (နောက်မှ အပြင်ထွက်လာမှာလား?)
Dunno. Depends on the weather. (မသိဘူး။ ရာသီဥတု အခြေအနေအရပဲ။)
သင့်မှာ ပေးစရာ အချက်အလက်လည်း မရှိ၊ မေးခွန်းတစ်ခုခုရဲ့အဖြေကိုလည်း မှန်းဆလို့မရတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
What time does the film start? (ရုပ်ရှင်ဘယ်အချိန်စလဲ?)
I have no idea. Why don't you call the cinema. (လုံးဝ မသိဘူး၊ ရုပ်ရှင်ရုံကို phone ဆက်ကြည့်ပါလား?)
I don't suppose you know where Braganza Street is? (Braganza လမ်းဘယ်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာ မသိလောက်ဘူး ထင်တယ်။)
I haven'taclue. Sorry. (လုံးဝ မသိဘူး။ စိတ်မကောင်းပါဘူး။)
Could somebody please explain how this car ended up in my drive way? (ကျွန်တော့်ခြံတွင်းလမ်းထဲကို ဒီကား ဘယ်လိုရောက်လာသလဲဆိုတာကို တစ်ယောက်ယောက် ရှင်းပြ လား?)
I haven't the faintest idea. ( ရေးရေးလေးတောင်မှ မသိပါ။)
ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကိုတော့ သင်မသိတဲ့ တစ်စုံတစ်ခုအကြောင်းကို တခြား တစ်ယောက်က လိုက်မေးနေတဲ့အခါ စိတ်တို၍ ပြောတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
Who left this rubbish on the table? (ဒီအမှိုက်တွေကို စားပွဲပေါ်ဘယ်သူ ထားသွားခဲ့တာလဲ?)
How should I know. I've only just come home. (ငါ ဘယ်လိုသိမလဲ? အခုမှ အိမ်ပြန်ရောက်တာကို။)
Why didn't he call me himself? (သူ ဘာ့ကြောင့် ကျွန်တော့်ဆီကိုယ်တိုင် ဖုန်းမဆက်တာလဲ?)
Don't ask me. I'm only the messenger. (ကျွန်တော့်လာမမေးနဲ့လေ။ ကျွန်တော်က သတင်းပဲပို့ပေးတာ။)
Why didn't he say he wasn't coming? (သူ ဘာ့ကြောင့် သူမလာဘူးဆိုတာကို မပြောတာလဲ?)
Search me. He never tells me anything. (မပြောတတ်ဘူးလေ။ သူ ဘယ်တုန်းကမှ ကျွန်တော့်ကို ဘာမှမပြောဘူးတာ။)
ဘယ်သူမှ မသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုပတ်သက်ပြီး သင့်အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ မသိတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
When will this situation ever be resolved? (ဒီအခြေအနေဟာ ဘယ်သောအခါမှ ပြေလည်သွားမှာလဲ?)
Who knows? It's been going on for so long now. How the situation will develop from here is anyone's guess. (ဘယ်သူ သိနိုင်မှာလဲ? ဒီအခြေအနေ ဖြစ်နေတာ ကြာလှပြီ။ ဒီကနေပြီး အခြေအနေဟာ ဘယ်လိုတိုးတက်လာမလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ တပ်အပ်မပြောနိုင်ဘူး။)
အကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင့်ကို လာမေးသူ သိသလောက်ပဲ သင်လည်း သိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Do you think the store will be open on Sunday? (တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စတိုးဆိုင်ဖွင့်လိမ့်မယ်လို့ ထင်သလား?)
Your guess is as good as mine. (ငါလည်း မသိဘူး။)
တစ်စုံတစ်ခုသည် မှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပေမဲ့ မှန်မမှန်ဆိုတာကို တိတိကျကျ ပြောနိုင်ဖို့ သင့်မှာ လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက်မရှိ အခါမှာအသုံးပြုပါ တယ်။
Has James left the company? I haven't seen him for ages. (James ကုမ္ပဏီက ထွက်သွားပြီလား? သူ့ကို မတွေ့တာ ကြာလှပြီ။)
Not as far as I know, but I haven't seen him recently either. (ငါသိသလောက်တော့ မထွက်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ငါလည်း အခုတလော သူ့ကို မတွေ့ဘူး။)
အကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင် မသိကြောင်း (သို့) နားမလည် ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Why did he do suchastupid thing? (သူဟာ ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်မိုက်မဲတဲ့အလုပ်ကို လုပ်တာလဲ?)
It beats me. (ငါလည်း မစဉ်းစားတတ်ဘူး။)
Macmillandictionaryblog.com မှ Ways of saying "I don't know" ကို ဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။